The Rohingya News Bank : UWSA
Showing posts with label UWSA. Show all posts
UWSA ‘ဝ’တပ်ဖွဲ့ကို အစိုးရက ပိုပြီးလိုက်လျောနေ သလား (၁)
UWSP/UWSA ၊ KIO/KIA ၊ ULA/AA ၊ PSLF/TNLA ၊ MNTJP/MNDAA ၊ SSPP/SSA ၊ PSC/NDAA
နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကြာ အပစ်ရပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ‘ဝ’ ဒေသဟာ သိသိသာသာ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပေမယ့်၊ တချိန် တည်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲခဲ့တဲ့ ကချင်ဒေသမှာတော့ တိုက်ပွဲတွေ ပြန်ဖြစ်လာပြီး ဒေသခံပြည်သူတွေ ဒုက္ခပင် လယ်ဝေနေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အစိုးရနဲ့တပ်မတော်တို့က UWSA ကို အထူးအခွင့်အရေးပေး လိုက် လျော ထားတာလား၊ ဘာကြောင့်လိုက်လျောရသလဲ ဆိုတာ KIO ခေါင်းဆောင်ဟောင်း၊ ယခု ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင် ဒေါက်တာတူးဂျာ နဲ့ ဦးကျော်ဇံသာတို့ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားပါတယ်။
Labels: 2019, mm, UWSA, ဗွီအိုအေ, ဝတပ်ဖွဲ့, သတင်းသုံးသပ်ချက်
Hidden but hopeful: the youth of Myanmar's cloistered Wa region.
Cloistered and highly-militarised, Wa's authoritarian rulers have virtually cut off the region from the rest of Myanmar
Cloistered and highly-militarised, Wa's authoritarian rulers have virtually cut off the region from the rest of Myanmar.
Labels: 2019, Chinese Influance, en, Mail Online, Myanmar, Myanmar China border, News, UWSA, Wa, Youth
Gas explosion kills 16 in Myanmar's remote Wa state: Wa army.
The self-proclaimed Wa State enjoys an unusual degree of autonomy within Myanmar and boasts the country's largest non-state army of around 30,000 soldiers
Labels: 2019, en, Ethenic, Gas Exlosion, Mail Online, Mandarin, News, Non State Army, UWSA